एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभकाे योग हुनेछ ।एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ । सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा
बिहिबार गणेशको पुजा आजा गर्दा तपाइको जीवनमा ५ शुभ खबर मिल्ने छ
हिन्दु धर्म अनुसार हरेक बार देवीको-देवाताको बार मानिने गर्छन । बिहिबार गणेशको पुजा आजा गर्ने गरेका हुन्छ । तपाइहरुले आटेको,सोचेको,रोकिएका अधुरा काम, व्यापार बिजिनेसमा सफलता नै सफलता मिल्ने छ । आजको दिन गणेशको बिशेष मानिन्छ । बिहिबार यी ५ काम गर्नुस्, तपाइको जीवनमा शुभ खबर मिल्ने छ.. बिहिबार गणेश भगवानको
पोल्यान्डमा एक २७ वर्षीया स्वस्थ महिलाले बच्चालाई जन्म दिएलगत्तै कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु भएको छ । नाम सार्वजनिक नगरिएकी ती महिला सहित पोल्यान्डमा मृत्यु हुनेको संख्या छ पुगेको छ । विश्वमै यति कम उमेरमा कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु भएकी उनी पहिलो महिला भएको मानिएको छ । ती महिलालाई आफ्नै आमाबाट
फिलिपिन्सकी एक महिला विमान चढ्न लागेकी थिइन् । विमान चढ्ने बेला उनको लगेजको तौल जाँच गर्दा निर्धारित न्यूनतम तौलभन्दा २ किलो बढी पाइयो । महिलाले त्यो बढी भएको २ किलोको लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भयो । अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि महिलाले गजबको आइडिया लगाइन् । उनले बढी भएको तौल बराबरका
यसरी गर्नुस् पूजा माता कालीकी साधना सन्यासी र तान्त्रिकहरु पनि गर्ने गर्छन् । माता कालीका भक्त मान्ने गर्छन् कि माता काली कालको संम्हार गर्ने र मोक्ष प्रदान गर्ने गर्छिन् । शुक्रवार कालीको उपसनाको लागि उनको तस्बिर वा मूर्तिमा स्वच्छ र पवित्र स्थानमा राख्ने र पानीले पखालेर मूर्तिमा तिलको टिका लगाउने
पाथीभरा ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । पाथीभरा मन्दिर हिन्दू एवं बौद्धहरूको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो । यो ताप्लेजुङ जिल्लाको १२ हजार फिट उचाइमा रहेको छ । विश्‍वास आस्था एवं पवित्रताकी देवी पाथीभराको यो पवित्र स्थल ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङ्गलिङबाट १९.४ कि.मी. पूर्वोत्तरतर्फ ३७९४ मी.को उचाईमा अवस्थित छ
परापूर्वकालमा गार्ईले पत्ता लगाएकोे भनेर चिनिने खोटाङको अर्खैलेस्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफा आझेलमा परेको छ । दर्शन गर्न सुतेरै पस्न र निस्कनुपर्ने अनौठो किसिमको गुप्तेश्वर महादेव गुफा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० अर्खौलेस्थित दुक्सिलीमा अवस्थित छ । विशाल चट्टानको फेदमा अवस्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफाभित्र सात जना दर्शनार्थी मात्र अटाउन सकिन्छ । कालो चट्टानले
मंगलबार खासगरी गणेश र हनुमानको आराधना गरिन्छ । यस दिन गणेशजीको आराधना गरे सम्पन्नत तथा सन्तान सुख मिल्ने र हुनमानको आराधना गरे हरेक कष्ट निवारण हुने गर्दछ ।यसरी मंगलबारको दिन भगवानको आराधना गरे लाभै लाभ मिल्नेछ । तथापी केहि कामहरु भने मंगलबारको दिन गर्न वर्जित गरीएको छ । धर्मशास्त्रका अनुसार
धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा बिनाको जीवन कस्तो होला ? पक्कै पनि धन सम्पत्ति बिना कोही कसैलाई पनि जीवन धान्न गारो हुन्छ । त्यसैले मानिस सम्पत्ति कमाउन जागीर गर्दछन् । तर त्यो जागीर पाउन पनि कहाँ सजिलो छ र ? कतिपय मानिसले अनैकौ उपाय गर्दा पनि जागीर पाउन सकेका छैनन् ।
आज मंगलबार । धेरैको प्रिय भगवान गणेशको पुजाआराधना तथा व्रतको लागि राम्रो मानिने दिन । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले हप्ताको सातै बारलाई विभिन्न देवी देवताको बारको रुपमा लिन्छन् र सोहि बारमा भगवानको प्रार्थना गर्छन् । सोहि अनुरुप मंगबारको दिन कार्यसिद्धिको लागि गणेश भगवानको पुजाआराधना गरिन्छ । भगवान गणेशको पुजा आराधना नगरी कुनै